SomaliaReport: Qaarax Miino oo Lala Eegtay Dagaal-Ooge Hore
By ABDI ABTIDOON 02/01/2012
Afar qof ayaa ku dhintay qarax ismiidaamin ah ayaa lala eegtay guriga dagaal-oogihii hore isla markaana ahna wasiirka macdanta iyo biyaha ee Dawladda Ku Meel Gaarka (DKMG) Soomaaliyeed, Cabdi Xassan Cawaale Qeybdiid isagoo shir uqabtay cuqaasha iyo siyaasiyiinta Galmudug ee koonfurta Gaalkacyo oo ah caasimada ay wada qaybsadaan gobolada madaxa bannaan ee Puntland iyo Galmudug.
Cali Haashi oo goobjooge ayaa Somalia report usheegay “Qarax aad uculus ayaa laga maqlay dhamaan koonfurta Gaalkacyo...ganjeelada gurigu way dhacday.”
Qaybdiid isagu kuma dhaawacmin oo saxaafada ayuu la hadlay.
Qaybdiid ayaa yiri “Afar ayaa ku dhintay oo ay ka mid yihiin labo ilaaladayda ah, qof dumar ah iyo miino isku qarxiyihii. Labo qof ayaa weerarka soo qaaday oo mid waa baxsaday. Midkood wuxuuu ahaa miino isku qarxiyaha. Markii weerarka lasoo qaaday waxaan shir kula jiray cuqaasha qolkayga fadhiga, ilaaladaydaa iyagana jabisay.”
Waxaa goobta isku hareereeyey ciidamada nabadsugida iyagoo baaritaan wada. Wax warbixin ah kama soo bixin madaxda Galmudug.
Hogaamiyaha al-Shabaab, Sheekh Cabdicasiss abuu Muscad ayaa sheegay inuu weerar fuliyey ismiidaamiye aad loosoo tababaray oo iyaga ah.
Hogaamiyaha oo la hadlay Raadiyo Andaluus ayaa wuxuu kusii daray “Waa weerar Jihaad oo lagu dilay dhowr ilaalada Qaybdiid ah. Qaybdidd waa kufaar taageera dawlada ku meel gaarka ah.”
Qaraxani wuxuu ka midyahay dhacdooyinkii ugu danbeeyey ee carqaladaha lagu gilgilay Gaalkacyo. Kooxaha burcadbadeeda ee ka hawlgala gobolka Mudug ayaa Gaalkacyo ka fuliyey qafaalasho shakhsiyaad sare, sida afduubkii shaqaalaha miino gurida ee Daanishka Jessica Buchanan iyo Poul Thisted iyo afduubkii ugu danbeeyey ee wariyaha Mareykanka ah Michael Scott Moore.
Gaalkacyo waxaa kaloo kusoo kordhay dhaqdhaqaaqa kooxda Islaaamiga ee al-Shabaab iyo colaada korodhay ee qaabaa’il ee sannadkii lasoo dhaafay.
Dagaalkii sokooye, Qaybdiid wuxuu ka tirsanaa kooxda fallaagada ee Bahda Qaranka Soomaaliyeed isagoo wasiirka arrimaha gudaha u ahaa dagaal oogihii caanka ahaa ee Jeneraal Maxamed Faarax Caydiid, laakiin Qaybdiid wuuu ka goostay Caydiid dayaaqadii 1996 isagoo 2007 uwareegay oo DKMG unoqday hogaamiyaha booliiska guuto dhan 500 malayshiaya ah. Dawladii Ra’iisul Wasaarihii Cumar cabdirashiid Cali Sharmaake wuxuu noqday Wasiirka macdanta iyo Biyaha.
Qaybdiid wuxuu aad ugu mashquulsanaa dhowaanahan ka ciribtirka burcabadeeda gobolka Galmudug isagoon wax masuuliyad ah hayn dhawaanahan. Wuxuu si toos ah iga soo horjeeday howlgalka fallaagada al-Shabaab ee gobolka galmudug, oo kutaal koonfurta Gaalkacyo.